Nabad u raadinta cagaarre - BBC News Somali
Nabad u raadinta cagaarre
5 Oktoobar 2010
Image caption Ciidanka Puntland
Maamulka Puntlnad ayaa gacanta ku haya qorshe lagu doonayo in lagu xakameeyo, xiisad colaadeed oo toddobaadkii la soo dhaafay ka oogantay degaanka Cagaarre oo ku aaddan galbeedka magaalada Burtinle taas oo u dhaxaysa beelaha degaankaas qaarkood.
Weli faahfaahin badan lagama bixin qaabka uu noqon doono qorshaha uu maamulku ugu talagalay daminta xiisadda ka taagan Cagaarre, hase ahaatee maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Garowe ka socday dhaqdhaqaaq xoog leh oo ay wadaan xubno isugu jira madaxda dawladda iyo kuwa dhaqanka.
Kulan arrintaas ku saabsan ayaa maanta magaalada Burtinle uga billowday xubno ka tirsan golaha wasiirrada, oo ay ka mid yihiin wasiirka degaanka iyo wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha oo ay weheliyaan Jeneral Carays iyo xubno kale oo iyana ka tirsan golaha barlamanka.
Waxaa kale oo kulankaas ka qaybgalaya odayaasha degaankaas, waxgaradka, iyo ganacsatada degmada Burtinle, waxaana kulankaas lagu lafagurayaa sidii loo joojin lahaa colaadaas muddada dheer soo noqnoqotay iyo kaalinta arrintaas uga aaddan dadka degaankaas ku dhaqan.
Waxaa kale oo la filayaa in magaalada Laascaanood iyo deegaanka Buuhodle ay ka yimaadaan dad fara badan oo isugu jira madaxda dhaqanka, iyo qaybaha kale ee dadwaynaha gobolka kuwaas oo la filayo inay qayb ka noqdaan ololaha lagu doonayo joojinta colaadda ka aloosan Cagaarre.
Dhinaca kalana madax kale oo dawladda ka tirsan oo ay wehliyaan kuwa dhaqanka ayaa iyana kulamo ku leh magaalada Garowe.
Saraakiisha dawladda qaarkood ayaa tilmaamay inay doonayaan in joojinta colaaddan ay ka qaybgalaan dad fara badan oo ka soo jeeda degaannada ay dhibaatadu u dhaxayso.
Saraakiishu waxay intaas ku dareen in inta taas laga gaarayo loo gogol xaarayo, in marka hore la joojiyo xiisadaha taagan isla markaasna la kala qaado ciidamo-beeleedyo isku horfadhiya dhowr meelood oo ka mid ah dhulka ay colaaddu ka dhacday.
Mushkiladdani waxay salka ku haysaa muran la xiriira xagga degaanka iyo daaqsinta, waxayna markii hore ka bilaabatay baraago laga qoday dhul xoolo daaqeen ahaa taasoo ay beelaha degaanku isku maandhaafeen kadibna isu rogtay dagaal hubaysan.
Xiisadda haatan oogan waxay ka dhalatay nin oday ah oo lagu dilay degaankaas, taas oo ay gaysatay mid ka mid ah beelaha daaqsinta isku hayay ee horayna ugu dagaallamay taasina waxay keentay in dablay ka soo jeedda beesha kalana ay weerar gaadmo ah ku dilaan shan qof.
Odayaasha dhaqanka qaarkood oo arrintan ka hadlay waxay soo jeediyeen in dhibaatadan lagu soo afjari karo oo keliya in marka hore la kala qaado ciidamada is horfadhiya, ka dibna la sameeyo dhul ka reebban daaqsinta, degaamaynta iyo baraagaha oo u dhexeeya beelaha ay dhibaatadu u dhaxayso sida uu u arko Ugaas Cabdullaahi Ciise Maxamed oo ka mid ah Isimada Puntlnad.